Posted on Waxaa laga yaabaa 19, 2022 Waxaa laga yaabaa 19, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 Shadi Trading - Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Gacanta Labaad ee Bahrain
3 Eudra-Jullele-ka iibiyeyaasha dharka lagu isticmaalo gudaha Nauru
4 Kaz Trading Inc. - Alaabta Dharka Gacmaha Labaad ee Bahrain
5 Hal qayb oo ka mid ah COAM PHIL. INC.
6 Alaab-qeybiyeyaasha Dharka la Isticmaalay ee Jumlada ee Nauru Gabagabada
Bahrain waa wadan yar oo ku yaala bariga dhexe. Inkasta oo uu yahay dal yar, Baxrayn wuxuu leeyahay dhaqaale ballaaran oo kobcaya, oo leh tiro warshado kala duwan ah oo ka qaybqaata kobaciisa. Mid ka mid ah warshadahaas waa ka ganacsiga dharka gacan labaad. Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal badan oo dharka gacan labaadka ah ee Bahrain, boostadani waxay liis gareyn doontaa oo sharxi doontaa shanta ugu sarreeya ee ugu caansan.
Hissen waa alaab-qeybiyaha gacan labaadka ah ee hormuudka ka ah Shiinaha. Shirkaddu waxay khibrad qani ah u leedahay warshadaha dharka gacanta labaad. Hissen waxa uu in ka badan 60 wadan siiyay dhar la isticmaalay in ka badan 10 sano, waxa ay aasaaska ka sameysteen goobta.
Hissen waa dhoofiyaha dharka ee la isticmaalo ee ugu kalsoonida badan aduunka. Waxay diiradda saarayaan fikradda xakamaynta tayada. Kooxdooda waayo-aragnimada leh waxay qabtaan habka kala soocida tayada adag.
Xariiq kasta oo kala-soocidda waxaa lagu qalabeeyaa kormeere, shaqaale kasta oo xirfad leh ayaa si taxadar leh u baaraya dhar kasta oo la isticmaalo.
Hissen waxa uu caan ku yahay in uu bixiyo dhar gacan labaad oo tayo sare leh oo qiimo jaban ah. Iyada oo leh 3 warshad weyn iyo 4 shaqaale khibrad leh, Hissen waxay siin kartaa tayo aad u weyn oo dhar la isticmaalay macaamiisheeda adduunka oo dhan.
Shadi Trading - Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Gacanta Labaad ee Bahrain
Shadi Trading waa shirkad ku takhasustay ka ganacsiga jumlada dharka la isticmaalay. Waxa la aasaasay 1998. Suuqyada ugu horreeya ee shirkadu waa Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe.
Shadi Trading waxa ay ku leedahay bakhaar weyn oo ku yaala Belgium, qiyaastii 2,000 mitir oo laba jibbaaran, oo soo saara ilaa 7000 oo tan oo dhar la isticmaalay bishii. Shirkaddu waxay dhoofisaa dharka la isticmaalay ka dib markii ay kala soocday oo ay u kala saartay si waafaqsan heerarka caalamiga ah.
Waxay leeyihiin koox shaqaale xirfadlayaal ah oo aad u tababaran oo khibrad u leh ururinta dharka la isticmaalay, kala-soocidda, iyo qiimaynta.
Eudra-Jullele-ka iibiyeyaasha dharka lagu isticmaalo gudaha Nauru
Eudra waa dhoofiye gacan labaad ah oo dharka ka shaqeeya oo inta badan ka shaqeeya suuqa jumlada ee caalamiga ah. Waxay leeyihiin xulasho weyn oo cabbirro ah oo la heli karo, iyadoon loo eegayn qaabkaaga.
Awoodda farsamaynta ee Eudra waxay dul wareegaysaa 40,000 kiiloogaraam maalintii. Iyaga oo naftooda u huray dhoofinta dharka la isticmaalay, Eudra waxay noqotay il caan ah oo la isku hallayn karo oo laga helo dharka gacan labaad ee suuqa jumlada.
Sida ay ugu heelan yihiin in dhar la isticmaalay oo tayo leh lagu bixiyo qiimo jaban ayaa ka dhigtay lamaane la aamini karo ganacsiyada aduunka. Haddii aad ganacsigaaga u raadinayso alaab-qeybiye la isticmaalay, ha ka fogaan Eudra.
Kaz Trading Inc. - Alaabta Dharka Gacmaha Labaad ee Bahrain
Kaz Trading Inc., oo xarunteedu tahay Japan oo la aasaasay 1998 xafiisyo laamo ah oo ku yaal Aasiya oo dhan, waa dhoofiye dhar gacan labaad ah oo ku takhasusay bixinta dharka la isticmaalo ee dadka waaweyn iyo carruurta labadaba.
Waxay leeyihiin xulasho ballaaran oo cabbirro ah oo la heli karo si ay ugu habboonaato baahiyaha shakhsiyaadka intooda badan, iyadoon loo eegayn nooca walxaha midabka aad eegayso! Booqo shabakada Kaz Trading Inc. maanta si aad wax badan uga barato dookhyada dharka ay isticmaaleen.
Iyadoo heerarkooda tayada sare leh ay yimaadeen fursado korriin taasoo u horseeday suuqyo cusub. Macaamiishooda waxay ku faafeen Yurub iyo Koonfur Bari Aasiya.
Hal qayb oo ka mid ah COAM PHIL. INC.
COAM PHIL., INC. waxay diiradda saartaa tayada dharka la isticmaalay ganacsiga jumlada. Ganacsiga shirkadu waxay adeegsatay dhar laga keenay USA, Japan ilaa Koonfur Bari Aasiya.
Waxay u kala soocaan, kala saaraan, oo xidhaan dharka la isticmaalo guud ahaan weel 40 cagood ah, waxayna soo saari karaan ku dhawaad ​​27,000 rodol oo dhar ah bishiiba.
Dharka la isticmaalay ayaa marka hore loo diraa xaruntooda canada ka hor inta aan loo qaybin meelo kala duwan oo caalamka ah. COAM waxay haysataa wadarta dakhliga sanadlaha ah $7 milyan waxayna ku jirtay ganacsi ilaa 2001.
COAM waxa ka go'an in ay caawiso dadka u baahan waxana ay ku dadaashaa in ay siiso adeega ugu wanaagsan ee suurtogalka ah macaamiisheeda.
Alaab-qeybiyeyaasha Dharka la Isticmaalay ee Jumlada ee Nauru Gabagabada
Haddii aad raadinayso alaab-qeybiyeyaasha dharka loo isticmaalo jumlada, Nauru waa meel fiican oo laga bilaabo. Shanta shirkadood ee kor ku xusan waa in ay ku siin karaan alaabooyinka iyo adeegyada aad u baahan tahay si aad u kobciso ganacsigaaga oo aad u socodsiiso. Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaadan go'aansan mid ka mid ah ganacsiyadan, hubi inaad u soo dirto waydiin si aad wax badan uga barato qiimahooda iyo wax soo saarkooda. Waxaad hubin kartaa inaad hesho alaab-qeybiyaha ugu fiican baahiyahaaga iyo miisaaniyadaada adoo samaynaya cilmi baaristaada.
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Baxrayn.
3 fikradaha ah5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Baxrayn"
Wow qoraalkan waa fiican yahay walaashay
Waxa uu falanqeynayaa arrimahan oo kale, sidaas darteed waan ogeysiinayaa iyada.
May 29, 2022 at 3: 01 pm
Haye! Miyaad jeclaan laheyd haddii aan bloggaaga la wadaago kooxdayda facebook?
Waxaa jira dad badan oo aan u maleynayo inay runti qadarin doonaan adiga
nuxurka. Fadlan i ogeysii Mahadsanid
May 29, 2022 at 8: 41 pm
June 8, 2022 at 2: am 21